40 jirku maxay uga dhigan tahay ninka | Niman qurux badan
Alicia tomero | | Ku habboon, Caafimaadka
Waa marxalad dhaxal gal ah oo qof walba soo maray. Haa ama haa, nin waxay gaari doontaa 40 sano taasina waxay noqon doontaa lama huraan. Kuwo badan ayaa ku qaata niyad wanaag iyo marxalad horumar ah. Kuwo kale waxay geli doonaan qalalaase shucuureed oo weyn, waxay aaminsan yihiin in gelitaanka tobankan sano ay ka badan tahay filashooyinka dhalinyarada.
Nin 40 jir ah ayaa gaadhi kara is weydii su'aalo badan. Joogsi ayaa lagu sameeyay gelitaankan cusub oo gelaya qiimayntaas yar ee wixii la noolaa sannado ka hor. Laga soo bilaabo halkan dhalanteedka ah oofin dhammaan dhalanteedka aan la xaqiijin ama niyad jabka ah in aan laga faa'iidaysan sannadaha.
1 Maxay ka dhigan tahay inaad 40 jirsatay?
2 Dhibaatada 40?
3 Isbeddelka jirka nin 40 jir ah
4 Dumarku waxay door bidaan afartaneeyo
Maxay ka dhigan tahay inaad 40 jirsatay?
Sida marxalad kasta, waxaa loo tixgelin karaa gelitaanka hal xilli iyo mid kale qayb hoosaadka hab shakhsi. Dhammaan riyooyinku run ma noqdeen? Markaad da'da 40 jir tahay waxaad beeran kartaa fikradan sababtoo ah guud ahaan Mashaariic aan tiro lahayn ayaa horay loo qabtay. Hadda waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii la tixgelin lahaa cidda aan nahay iyo haddii aan sii wadi karno inaan nafteena u buuxinno dad ahaan.
Waxaa jira sheekooyin badan oo laga soo ururiyay waxa raggu u malayn karaan marka ay gaadhaan 40 jir. Taageero badan ayaa gelaya marxalad cajiib ah halkaas oo waxaad bilaabaysaa inaad nasato iyo wax kasta oo kale ma bixiyaan wax xun. Kuwa kale waxay u arkaan inuu yahay hoos u dhaca muuqaalka jirka, laakiin qaar kale waxay u arkaan in galmadoodii ay si wanaagsan isu beddeshay, aad ayay isu garanayaan dhinacaas. Ragga kale waxay soo galaan muddadan oo ay dib u eegaan oo u fiirsadaan midhihii ay beerteen oo dhan, iyagoo ixtiraamaya mawduuca jacaylka, dhaqaalaha iyo bulshada.
Rag badan baa taas dareemayaa waxaa laga yaabaa inay gaareen heerkoodii ugu sarreeyay. Waxay ka tagaan ammaan darro badan oo waxay yaqaanaan sida loo wajaho marxalad cusub. Waxay awood u yeesheen inay saxaan khaladaadkooda oo ay ka gudbaan godad badan, markaa hadda waxay dareemayaan caqli badan oo waxay yaqaanaan sida loo galmoodo.
Waxa laga yaabaa in hamigaagu kor u kaco oo hadda way badan yihiin diiradda saara sidii aad u heli lahayd wakhtigaaga iyo booskaaga. Hadda way garanayaan waxa muhiimka ah waxayna rabaan inay wax badan ka helaan tayada. Marka la eego ammaan-darradooda sidaan horeba u soo sheegnay, waxay yaqaanaan sida loola wajaho wax kasta oo leh mustaqbal wanaagsan, waxay yihiin mulkiilayaal badan oo ficilladooda ah wayna jecel yihiin si ay hadhow u timaado. Qaarkood waxay ka welweli doonaan inay balaariyaan mashruucyadooda kuwa kalena waxay u baahan doonaan inay la qabsadaan noloshooda caadiga ah.
Da'dan, qof kastaa wuu ka warqabaa socodka waqtiga. Kuwa caanka ah Qalalaasaha 40-aadku waxa laga yaabaa ama laga yaabaa inaanay dhab ahayn, hadba qofka. Miisaanka nolosha ayaa la sameeyaa waxaana lagu kala duwan yahay xaqiiqada, iyada oo la qiimaynayo mashaariicda la dhammaystiray iyo kuwa aan qabsoomin.
Rag badan laga yaabaa inay niyad jabaan taasina waxay ku keentaa xanuun. Waxay dareemayaan niyad jab iyo niyad jab Muddo sannado ah oo aanay buuxin dhammaan guulihii ay gaadheen taas oo ka qaadaysa caafimaadkooda maskaxeed. Qaar kale ayaa ilaalin doona adiga jirka oo sii xumaanaya, Ma aha kuwo aad u xoog badan, waxay dareemayaan murqo xanuun badan, aad bayna u daal badan yihiin. Qaybta soo socota waxaynu ku sifaynaynaa isbeddelada la socda da'dan.
Isbeddelka jirka nin 40 jir ah
Laga soo bilaabo da'da 40, raggu waxay bilaabeen inay tijaabiyaan isbedel ku dhaca jidhkaaga. Testosterone ee dhiiga waxay bilaabataa inay yaraato da'dan waxayna galaan waxa loogu yeero andropause, halkaas oo tayada noloshooda ay ka yara lunto.
Isbeddelladan dhexdooda waxaad bilaabi doontaa inaad dareento daal badan, hurdo la'aan, lafo-xumo iyo korodhka dufanka gudaha. Waxay la socon doontaa hoos u dhaca rabitaanka galmada iyo kacsiga xaaladaha qaarkood waxay bilaabi doonaan inay noqdaan kuwo tayo liita. La'aanta hoormoonkan waxay sidoo kale saameyn kartaa niyadda taasoo keenta walaac badan iyo xaaladaha qaarkood niyad-jabka. Isbeddelladan waa in la iska tuuraa sida dhacdo dabiici ah oo aan ahayn in ay ku yimaadeen hypogonadism.
Dumarku waxay door bidaan afartaneeyo
Nimanka afartameeyo jira waa nasiib. Waxaa jira tirokoobyo badan oo sheegaya in haweenku ay doorbidaan ragga da'daan ah sababtoo ah mar hore ayay garanayeen waxay rabaan. Bilawga, qaar badan ayaa horeyba u lahaa fikrado aad uga cad cad marka loo eego markay ahaayeen 25 sano jir waxayna yaqaaniin sida uu xiriirku u ekaado lammaane ahaan.
Waxaa laga yaabaa in noloshu marar badan kugu dhufatay iyo waxay yaqaaniin sida loo hago noloshooda. Waxay hore u lahaayeen madax-banaanidooda, saaxiibadood, waxbarashadooda, iyo xataa gurigooda iyo baabuurkooda. Tani waxay ka dhigaysaa waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho badan.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah xogta laga soo ururiyay cilmi-baarisyo kala duwan, nin wuxuu bilaabaa inuu si shucuur ah u bislaado da'da 43, sidaas darteed waxay yihiin rag aad u faham badan, waxay si fiican u taageeraan lamaanayaashooda waxayna aad u ilaaliyaan qoyskooda. Noloshu maaha inay soo marto qoomamo, markaa haddii aanad ka niyad jabin inaad gaadho heerkan weyn, waxay sidoo kale la mid tahay inaad ka gudubto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » 40 jirku maxay uga dhigan tahay ninka